Vaovao - Ny fantsom-pandraketana dia misy sosona maro an'ny fiberglass manokana namboarina tamina resina.
1.Hatra mafy sy lanja maivana: ny hamafin'ny fanjaitra aorian'ny fanasitranana dia avo 20 heny noho ny lalotra vita amin'ny lovantsofina. Ity endri-javatra ity dia miantoka fikolokoloana azo antoka sy mafy aorian'ny famerenanana marina. Ny fitaovana fametahana dia kely ary maivana ny lanjany, mitovy amin'ny 1/5 ny lanjan'ny lalotra sy 1/3 ny hateviny izay mety hahatonga ny faritra voakasik'izany hitondra lanja kely kokoa, hampihena ny enta-mavesatra amin'ny fampiharana aorian'ny fametahana, manamora mivezivezy ny ra ary mampiroborobo ny fanasitranana.
2. Fanaparitahana rivotra madio sy madio: ny fehin-kibo dia mampiasa kofehy manta avo lenta sy teknolojia fanenomana harato tsy manam-paharoa izay misy fidiovan-drivotra tsara.
3.Haingam-pandeha mafy haingana: Haingana ny fizotran'ny fehy. Manomboka manamafy 3-5 minitra aorian'ny fanokafana ilay fonosana izy ary mahazaka ny lanjany ao anatin'ny 20 minitra raha toa ka maharitra 24 ora ny fehy vita amin'ny plastera mba hanamafisana sy hitondra ny lanjany.
4. Fampitana taratra X-tsara tsara: ny fehy dia misy fatran'ny taratra tsara indrindra ary mazava ny vokan'ny taratra X izay manampy ny dokotera hahatakatra ny fanasitranana ny rantsambatana voadona amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fizotran'ny fitsaboana.
5.Fanoherana tsara ny rano: aorian'ny fihamafisana ny fehin-kibo, malama ny atiny ary 85% ambany noho ny plaster ny hamandoana. Na dia miharihary amin'ny rano aza ilay rantsambatana voadona, dia azo antoka fa maina ilay faritra voadona.
6. Mora miasa, malefaka, plastika tsara
7.Fampiononana sy fiarovana: A. Ho an'ny dokotera, (ny faritra malefaka manana alàlan'ny fanamorana tsara kokoa) io endri-javatra io dia mahatonga azy ho mora sy azo ampiharina amin'ny dokotera. B. Ho an'ny marary, ny fehin-kibo dia mihena kely ary tsy hamokatra ireo soritr'aretina tsy mahazo aina amin'ny fihamafisan'ny hoditra sy ny mangidihidy aorian'ny maina ny fehikibo.
8.Fampiharana marobe: fanamafisana ivelany orthopedic, orthopedics ho an'ny orthopedics, fitaovana miasa fanampiny ho an'ny prostheses sy fitaovana fanampiana. Stent fiarovana any an-toerana ao amin'ny departemantan'ny may.